SOMALITALK - FRANCE
Sharcigii Jacques Chirac ee Dugsiyada Faransiiska Lagaga Mamnuucayey Khimaarka Gabdhaha Muslimiinta oo Maanta Ka Dhaqan Gelaya
iyo Ruushka oo Sannadkan markii ugu horeysey iskoolada Lagu dhigi doono Taariikhda Diimaha oo Islaamku kamid yahay.
Gabar Muslimad ah oo ka mudaharaadeysa mamnuucida Khimaarka France
Maanta oo ku beegan Khamiis (September 2, 2004) oo ah maalinta ugu horeysa sannad dugsiyeedka 2004-2005 ee dugsiyada Hoose/Dhexe ee dalka Faransiiska ayaa waxaa dalkaasi ka dhaqan geliya sharcigii uu madaxweynaha dalkaasi ku mamnuucay in gabdhaha Muslimka ay Iskoolka ku xirtaan Khimaarka.
Waxaa sharcigaasi si toos ah u khuseeyaa oo ay tahay in ay u hoggaansamaan waa 12 million oo arday kuwaas oo dhigta 60,000 oo ah Dugsiyo Hoose iyo 11,000 oo ah Dugsiyada Sare ee dalka France, waa sida ay werisey hay'ada dalkaasi warka u faafisa ee AFP. Waxayse arinta Khimaarku si gooni ah saamayn ugu yeelaneysaa Muslimiinta ku dhaqan France oo tiradoodu tahay 5 million.
Ms Jenny Taylor oo ah qortay "Islam & Islam and Secularisation" oo ay soo xigatey hay'ada wararka ee CNA (Asia) waxa ay sheegtay in 'xijaabka loo arkay aasaaska islaam ka dhigidda, taas oo ay sheegtay in ay u malaynayso in faransiisku arkeen..."
Waxaa Soomaali badan weli madaxooda ka guuxaya hadalkii sannadkan 2004 horaantiisii kasoo yeeray Maxamed Dheere ee mamnuucida Indha Shareerka gabdhaha Muslimaadka ah, taas oo markiiba dad badan xusuusisay arintan Faransiiska oo aan markaas weli dhaqan gelin.
TAARIIKHDA DIIMAHA OO ISLAAMKU KAMID YAHAY AYAA MARKII UGU HOREYSEY LAGU DHIGI DOONO DUGSIYADA RUUSHKA
Waxaa sannad dugsiyeedkan 2004/2005 markii ugu horeysey iskoolada Ruushka lagu dhigi doonaa taariikhda Diimaha, taas oo ardayda fursad u siin doonta in ay bartaan taariikhda diimaha oo uu Islaamku kamid yahay. Sidaas waxaa shaaca ka qaaday wasiirka waxbarshada Ruuska, waxa uu wasiirku arintaas ku sheegay warsaxaafadeed Agoosto 31, 2004, sida ay faafisay islamonline. Dalka Ruushka waxaa ku dhaqan 19 million oo Muslimiin ah, taas oo islaamka ka dhigeysa diinta labaad ee dalka Ruushka ay dadka ugu badani haystaan..
WARARKII HORE EE ARINTA KHIMAARKA:
Madaxweynaha Franasiiska oo Ansixiyey in Khimaarka Laga Mamnuuco Iskuulada Faransiiska
Arbaca (17/12/2003) ayaa madaxweynaha Faransiiska, Chirac, uu shaaca ka qaaday in uu doonayo in Faransiiska iskuuladiisa laga mamnuuco khimaarka, waxana uu rabaa in arintaas mamnuucida laga dhigo sharci inta ka horeysa sannad dugsiyeedka 2004.
Dhibaatooyinka Kala Duwanaanshaha Manaahijta Dugsiyada Muqdisho waa sidee?
Warbixin Dugsiga Ablaal.. Guji...
Faransiisku waa wadanka ugu Muslimiinta badan Yurub, waxaana dalkaas ku nool 5 million oo muslimiin ah.
Dhanka kale waxa uu Chirac wax-kama-jiraan kasoo qaaday soojeedin ahayd in labada ciidood ee Muslimka (Eid el-Kabir) iyo Yuhuuda (Yom Kippur) laga dhigo maalmo fasax qaran ah, soo jeedintaas ciidaha wuu diidey, laakiin wuxuu ogolaaday soo jeedintii ahayd in Khimaarka la mamnuuco.
Faransiiska oo Qarka u Saaran in uu Soo Saaro Sharci Mamnuucaya Khimaarka Gabdhaha Muslimiintu Ku Xirtaan Iskuulada
Qoraalkan Waxaa soo uriryey Bahda SomaliTalk.com | December 14, 2003
Jacques Chirac | Lila iyo Alma Levy
Wararka ka imanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in dalkaasi uu Qarka u Saaran in uu Khimaarka ka Mamnuuco Goobaha Dawladda, gaar ahaan iskuulada, taas oo ah in aan gabdhaha muslimiinta ahi khimaar ku xiran karin iskuulada.
Guddi katirsan madaxtooyada Faransiiska ayaa soo jeediyey arintaas mamnuucida xijaabka (khimaarka) muslimiinta in aan lagu xiran karin iskuulada dawladda, waxa kale oo mamnuucidaas la socda calaamadaha istalaabta ee kiristaanka iyo kuwa yuhuudda. Arintaas oo hadda siweyn u kala qaybisay Faransiiska. Waxaana la sheegay in madaxweynaha Faransiiska, Chirac, uu arintaas go'aan ka gaari doono toddobaadkan, taas oo qaar warbaahinta ka mid ah ay tilmaameen in uu muujiyey sida uu u raacsan yahay go'aankan mamnuucida ah.
Guddiga arintan loo saaray oo ka kooban 20 qof oo uu hogaaminayo wasiir hore ee dawlada France oo lagu magcaabo Bernard Stasi, ayaa khamaiistii lasoo dhaafay soo jeedintooda u gudbiyey madaxweynaha Faransiiska Jacques Chirac, waxan arintaas ay gudigaasi soo falan qaynayeen muddo saddex bilood ah.
Waxaa wararku sheegeen in sababta sharcigan mamnuuca ah ka dambaysa ay tahay (waa sida Faransiisku sheegtay'e) xeerka loo yaqaan kala saaridda xukunka iyo diinta - oo ah in la kala saaro diinta iyo xukunka. Laakiin Waxa warbaahinta qaarkeed ay si qayaxan u tibaaxeen in arintan si bareer ah loogu dan leeyahay Muslimiinta ku dhaqan dalka Faransiiska.
Dadka Faransiiska oo tiradoodu dhan tahay 60 million waxaa Muslim ka ah qiyaastii boqolkiiba toddoba (7%).
Alma Levy, oo 16 jir ah, oo xigta dhanka bidix, waxay tilmaameysaa khimaarka walaalsheeg Lila oo 18 jir ah, markaas oo ay warbaahinta l ahadlayeen ayagoo jooga Faransiiska taariikhduna ahayd Oct. 13, 2003 [Sawirka AP]
In xijaabka laga fogeeyo albaabada iskuulka waa arin lagag adhaqmo wadamo badan, ka akhri IslamOnline.. Guji
Arinta Khimaarka gabdhaha ee iskuulada Faransiisku waxa ay hoos ka holceysey ilaa sannadkii 1989. Markaas oo laba gabdhood oo walaalo ah ay diideen in ay iska qaadaan khimaarka, waxayan arintani sii xoogeysatey markii Octoobartii lasoo dhaafay iskuulka laga cayriyey laba gabdhood oo walaalo ah oo la yiraahdo Lila iyo Alma Levy, taas oo cayrintooda sabab looga dhigay in ay jebiyeen xeerkii iskuulka u dhignaa - khimaarka ay xiran yihiin awgeed.
Gabar yar oo uu warameysey Telefishanka NBC ee Maraykanka ayaa tiri wax rajo iyo mustaqbal ah ugama jeedo Faransiiska, waxaa mustaqbalkaygu yahay Ameerika iyo Briton oo gabdhuhu ay xor u yihiin khimaarkooda.
Sida ay warbaahintu sheegtay xeerkani kuma koobna khimaarka, waxaa sida la sheegay ku qoran warbixinta qormada xeerkaas (ayadoo aan la magcaabin diin) in qaar kamid ah cisbitaalada faransiiska dhexdooda meelaha dadku maro laga dhigay meelo lagu tukado iyo in qaar rag ah ay dumarkooda u diideen in ay dhakhaatiir rag ahi daaweeyaan, taas oo qoraalku arintaas ku tilmaamay mid ay ka dambeeyaan kooxo nidamsan oo tijaabinaya iska caabinta dadweynaha.
Jariidada lagu magcaabo Al-Watan ee kasoo baxda Qadar waxa ay sheegtay in ay kalsooni ku qabto in madaxweyne sida Jacques Chirac oo kale ah uu leeyahay xikmad uu sharcigaas ku baabi'yo, sharcigaas oo aan taabanayn Muslimiinta Faransiiska oo keliya balse saamaynaya isla markaana carqaladayndoona dalalka Muslimiinta ah.
Jariidada Al-Quds Al-Arabi oo ka soo baxda London waxa ay soo jeedinta sharcigaas mamnuucida khimaarka ku tilmaantay mas'uuliyad xumo. "Waxaan caqliga gelayn in sharciga Faransiisku u ogolaado in gabdhuhu xirtaan goonooyin gaagaaban, kuwaas oo naasohoodo muujinaya, una diidaya in ay is asturaan" ayaa jariidadu qortay ayadoo ku dartay "Waxaa sharci darro ah in qof uu madaxiisa asturo, laakiin in uu muujiyo nasihiisa, hoostiisa, lugihiisa waa sharci" miyaa ayaa jariidadu tiri.
Jariidada China Daily ee shiinaha waxa ay tiri Madaxweynaha Faransiiska Jacques Chirac oo hadda ka hor si cad u sheegay in uu kasoo hor jeedo khimaarka lagu xiranayo fasalada, Arbacada ayuu cadayn doonaa ama ku dhawaaqi doonaa in uu sharcigaas taageersan yahay iyo in kale.
Chirac oo toddobaadkii hore mar uu safar ku tegey Tunisia, la hadlayey arday dhigta dugsi sare waxa uu yiri khimaarka waxaa dalka Faransiiska looga arkay 'nooc weerar ah'.
Kaniisadaha Kirirshtaanka iyo Yuhuudu aad ayey arintaas mamnuucida khimaarka uga soo hor jeesteen, waxayna weydiisteen in sharcigaas aan la hir gelin. Laakiin qaybta loo yaqaan Protestant Federation of France waxay yiraahdeen arintani wexey u muuqataa mid la aqbali karo.
Arintan khimaarka sida ay wararku sheegeen kuma eka dalka Faransiiska oo keliya.
Fereshta Ludin oo ku guulaysatey in loo ogolaado khimaarka marka ay iskuulka wax ka dhigeyso.
Dalka Jarmalka 16ka gobol ee uu ka kooban yahay aad ayey ugu kala qaybsan yihiin arinta mamnuucida khimaarka, taas oo gobolada qaarkood aysan wax dhib ah u arkin khimaarka, halka gobolada Bavaria iyo Baden-Wuerttemberg ay sannadkan soo jeediyeen in lasoo saaro sharci mamnuucaya khimaarka iskuulka ee ay xirtaan gabdhaha Muslimiinta ah. Weliba dalka Jarmarka mamnuucida kuma jiraan calaamadaha Kirishtaanka iyo Yuhuuda.
Bishii September ee 2003 ayey ahayd markii ay maxkamad sare oo ku taal gobolka Baden-Wuerttemberg ee dalka Jarmalka ay xukuntay in macallimad Muslim ah xiran karto khimaarkeeda marka ay Iskuulka dhigeyso, macalimadaas oo lagu magcaabo Fereshta Ludin, da'deeduna tahay 30 jir, asalkeediina ka timid dalka Afghanistan. Macalimadaas waxaa sannadkii 1998 loo diidey shaqada macalinimada sababtoo ah waxay ku adkaysatay in ay xiran doonto khimaarkeeda. Arinta maxkamada waxay guul weyn u ahayd macalimadaas, laakiin arintaasi waxay sababtay in gobolka oo dhammi uu hadda u diyaar garoobayo in la soo saaro sharci iskuulada ka mamnuucaya khimaarka.
Sannadkii 1999kii ayey ahayd markii ay dumar Muslimiin ah ay socod ku mareen wadooyinka magaalada Turin ee dalka Talyaaniga ayagoo dalbanayey in loo ogolaado in khimaar u xiran karaan sawirada aqoonsiga rasmiga ah ama dukumiintiga rasmig ah sida baasabaoorada iyo teesarayaasha.
Dumar u dhashay qabiilka Tatar
Bishii May ee 2003 waxay u ahayd guul dumarka dalka Ruushka kaddib markii loo ogolaaday in ay xiran karaan khimaar marka ay iska qaadayaan sawirka basaaboorka, arintaas oo ay u dagaalamayeen koox muslimiin ah oo u badan gobolka muslimiintu ku badan yihiin ee Tatarstan, ayagoo ka dagaalamayey xukunkii uu sannadkii 1997 soo saaray wasiirka arimaha gudaha ee ahaa in la mamnuuco khimaarka loo xiranayo Baasaboorka.
Saddexda dumarka ah ee dhanka bidix ka muuqda waxa ay ka dhasheen qabiilka Tatar ee Tatarstan waxayna dacwad soo oogeen kadib markii hay'adda baasaboorada qaabilsan ay diidey codsigoodii baasaboorka sababtoo ah waxay xirnaayeen khimaar, arintaasi waxay dhacday bishii August ee 2002, waana tan ay sannadkan guusheeda heleen.
Bishii Febraayo ee 2002 ayey ahayd markii iskuul kuyaal dalka Singapore laga cayriyey laba gabdhood, kaddib markii ay diideen in ay iska qaadaan khimaarka, labadaas gabdhood oo aad u da'yar aad ayey uga xumaadeen in Iskuulku u diidey in ay xirtaan khimaarka ay jecel yihiin xirashadiisa.
Nurul Nasihah oo 7jir ah aad ayey uga xumaatay markii iskuulka loo diidey khimaarkeeda awgeed
Mid kamid ah gabdhahaas oo magaceeda la yiraahdo Nurul Nasihah da'deeduna tahay 7 jir, waxaa la sheegay in ay aad u oydey. Aabeheedna waxa uu yiri gabadhaydu aad ayey ogdey markii loo diidey iskuulka.
Maamulaha iskuulkuna waxa uu u sheegay in ay Iskuulka kusoo laaban doonto gabadhaas yari haddii ay khimaarka iska soo dhigto, laakiin aabeheed wuxuu yiri waxaan maamulaha u sheegnay in aan gabadhanadu iskuulka ku aadayn khimaar la'an ayadoo ka tegeysa diintanada. Waxaan ogolaan karaa khimaar la'aanta haddii iskuulku qoraal rasmi ah ii qoro kaas oo ah in gabadhaydu ay iskuulka ku xiran doonto khimaarka marka ay qaan gaarto ama ay gaarto dugsiga sare.
Qiso ka dhacday dalka Turkiga bishii April ee 2003 ayaa ahayd in xaaska mid ka mid xubnaha baarlamaanka dalkaasi ay go'aansaday in aysan ka qayb gelin mid ka mid xaflad uu ninkeedu qabaneyey sababtoo ah muran ka yimid khimaarka ay xiran tahay. Sida wararku sheegeen dalka Turkiga oo dadka ku dhaqani ay Muslim u badan yihiin waxaa mamnuuc ah in khimaar lagu xirto dhismayaasha dawladda.
Bishii July ee 2002 ayey ahayd markii ay gabdhaha Turkigu dhigeen mudaharaad si loogu ogolaado in ay iskuulka ku xiran karaan khimaar. Dalka Turkiga nidaamka uu hadda ku dhaqmo waxaa u dejiyey Mustafa Kemal Ataturk, markii uu dejiyey nidaamka uu u bixiyey Turkiga cusub sanadadii 1920-naadkii.
Dhankaa iyo dalka Ingiriiska, Gabar lagu magcaabo Shaista Aziz ayaa bishii September ee 2003 waxay qortay: "Waxaan ahay Muslimad Ingiriis ah, Dharka ayaa aad iigaga qiima badan wax kasta, dharka aad xiran tahay waa aqoonsi, muddo markii aan jid dheer soo maray kadib ayaan go'aan saday in aan xirto xijaabka (khimaarka)."
Bishii Augosto ee 2000 ayaa Dacwad socotay muddo labo sanno, kuna saabsanayd gabar khimaarka (masarka) madaxa u saarnaa awgeed loogu diiday inay si tababar ahaan uga shaqeyso dukaan weyn oo la yiraahdo "MAGAZINE", kuna yaala bartanka magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa xukunkii ugu danbeeyay soo saartay maxkamadda sare maalinimadii khamiista ee ina dhaaftey.
Gabadha oo la yiraahdo Islam Amin una dhalatay dalka Ciraaq 17 jir ahna ayaa si weyn ugu faraxday natiijadii maxkamadda, ka dib markii ay maxkamadda ku xukuntay dukaanka Magazine inuu gabadha magdhow ahaan u siiyo 10.000 kr (qiyaastii 1200 USD), iyadoo ay maxkamaddu xukunkaas u cuskatay sharciga diidaya kala sooca iyo midabtakoorka dadka. Reerka gabadha ay ka dhalatay iyo jaaliyadaha muslimiinta ee ku dhaqan dalka DK ayaa si aad ah ugu riyaaqay natiijadii maxkamadda. [Warkaas oo dhan halkan ka akhri]
Fartun Nur, gabar Soomaaliyeed oo degan Minneapolis
Bishii June ee 2000 ayey ahayd markii ay Jariidad kasoo baxda Minnesta ay qortay hadalkan: "Marka hore waxay xirataa maro-dheer oo dhulka joogta. Kaddibna shaati gacmo-dheere ah. Xijaabka iskama bixiso, wayna isku hagaajisaa (khimaarka) si ay u xaqiijiso in uu weli asturayo timaheeda. Kaddib, waxay gashataa surweel u jooga ruugagga, waxayna ku carartaa fasalka jirdhiska ee gabdhaha keliya u gaarka ah." - Gabadha sidaas looga sheekaynayaa waa Fartun Nur, oo markaas 17 jir ahayd, deggana Minneapolis, USA. Waxay markaas jariidadu is barbar dhigeysey gabdho soomaaliyeed... [warkaas oo dhamaystiran halkan ka akhri]
SAWIRADA: Qaarkood Google Seach
Wararka ugu dambeeyey ee arinta Khimaarka ku soo kordhay... GUJI
Daraasad lagu sameeyay Muslimiinta Maraykanka [May 2001]
Wiil Soomaaliyeed oo ay Garaaceen Booliiska Canada